Welcome to Aayaha Nolosha » MARKII UU U SHEEGAY INUU GUURSANAYO AYAY DISHAY OO HILIBKIISANA KARSATAY
MARKII UU U SHEEGAY INUU GUURSANAYO AYAY DISHAY OO HILIBKIISANA KARSATAY
Haweenay ayaa dishay Nin muddo 7-sano ah xiriir jacayl uu kala dhaxeeyay oo ay saaxiibo ahaayeen.
Haweeneydaa ayaa ninka dishay kadib markii uu u sheegay inuu guursanayo haweeney kale, waxaana la sheegay in hilibkiisa ay jarjartay kadibna ay ku karisay Bariis.
Hilibka ninka iyo Bariiska ayay siisay shaqaale Bakistaaniyiin ah oo ka howlgala dalka Imaaraadka, kuwaasoo ka shaqeynayay meel ku dhow gurigeeda, iyaguna casuumaad ayay u qaateen wayna cuneen.
Haweeneyda iyo ninka ay dishay oo u dhashay dalka Marooko ayaa waxay ku noolaayeen dalka Imaaraadka carabta, waxaana dilka ninkaasi soo ogaaday walaalkii oo markii uu muddo waayay ka baadigoobay guriga gabadha, kadibna waxa uu gurigii Haweeneyda ka helay Ilko Bani’aadam oo uu ka soo saaray Mashiinka khudaarta lagu shiido, wuxuuna u geeyay Booliska.
Ilkahaa oo lagu baaray DNA ayaa lagu ogaaday in ninka la dilay uu lahaa, kadibna waxaa la soo xiray haweeneydii oo qiratay inay iyadu dishay, hilibkiisana inta jarjartay ay ku karisay Bariis isla markana ay siisay shaqaalo Bakistaaniyiin ah oo ka shaqaynayay goob ku dhaw guriga ay deganayd.
Wargayska The National ee ka soo baxa dalka Imaaraadka ayaa wareysatay ninka la dilay walaalkii wuxuuna u sheegay in haweenayda dishay walaalkii ay u sheegtay in guriga ay ka ceyrisay, balse markii uu guriga ka baarbaaray uu ka soo helay Ilko Bani’aadam, kadibna uu Booliska u geeyay.
Haweenayda ayaa markii la soo qabtay ay Booliisku su’aalo waydiiyeen kadibna waxay ka dhacday taagnida markaas oo ay qiratay dilka ninka ay saaxibka ahaayeen.
Waxay sheegtay in ay dishay kadib markii uu u sheegay inuu guursanayo gabar Marookaan ah, sababtaasna ay ku xambaartay dilkiisa, waxayna sheegtay in saaxibadeed ay ka caawiyeen in guriga ay ka nadiifiso haraadiga dhiiga ee ninka ay dilka u geysatay.
Haweenaydan lagu eedeeyay dilka saaxibkeed ayaa la sheegay in isbitaalka loo diray si maskax ahaan loo baaro in ay caafimaad qabto iyo in kale.